Ao Japan, Mametraka Ireo Mpialokaloka Ho Eny Alohan’ny Sehatra Ny Fandaharan’ny Radio Sy Ny Loza Voajanahary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2013 5:02 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, English
“Hitanao, hafa ny eto. Azo antoka tsara sady milamina kokoa eto Japana,” hoy ilay vehivavy namako. Nampiditra taminy ny hevitra fonosin'ny Global Voices aho: fahenoana tantara avy any amin'ny lafy lavitry ny tany, satria “miresaka izao tontolo izao”
Amin'ny lafiny iray dia marina ny azy. Tsy dia mila mandrakariva miasa saina amin'izay mitranga any rehetra any ny olona monina ao Japana. Maneho ny toy ity ny lohateny vaventin'ireo gazety: ao anatin'ny vaovao hariva alefa ho an'ny vahoaka, 7% monja amin'izany no vaovao iraisam-pirenena. Mpikaroka iray izay nanara-maso ny fandefasana vaovao [ja] nandritra ny fe-potoana naharitra telo volana no nahatsikaritra fa mitontaly roa minitra, na 0.7 % amin'izy rehetra, no natokana hitaterana izay zavatra mba mikasika ny tanibe Afrikana.
olom-pirenena Japone iray tsy niombon-kevitra tamin'izany i Katsuya Soda, izay mino fa isan'ny mikiky mangina ny zavatra rehetra ao Japana ny tsy fahafantaran'ny olona ny raharaha iraisam-pirenena. Tamin'ny Febroary 2004, nanomboka ny Nanmin Now! [ja] i Katsuya, fandaharana iray ao amin'ny fampielezampeo iresahana ny olan'ireo mpialokaloka, izay mandeha ao amin'ny radiom-paritra iray ao Kyoto. Manomboka amin'ny fampidirana ataon'i Katsuya amin'ny fitenim-paritra ao Kyoto ny fandaharana: “Fotoana izao ho an'ny Nanmin Now!, Fandaharana iray mitatitra tahaka ny filazàna ny toetr'andro ny vaovao momba ireo mpialokaloka “
Miaraka amin'ny Nammin Now!, ny nofinofin'i Katsuya dia ny hitatitra vaovao mikasika ireo mpialokaloka, mba hahatonga ny olan'ireo mpialokaloka ho zavatra iray ao an-tsain'ireo Japone mpiray tanindrazana aminy. Tonga tao aminy ny aingam-panahy hamorona ilay fandaharana, taorian'ny namakiany boky iray nosoratan'i Sadako Ogata, Kaomisera Ambonin'ny Sampan'ny Firenena Mikambana Misahana Ny Mpitsoa-ponenana – United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). “Nampianatra ny lanjan'ny andraikitry ny media sy ny fifandraisana maharitra izy io, ary dia tonga tao an-tsaiko ny hevitra hizara ny toetr'andro,” hoy i Katsuya. “Nanapa-kevitra aho hanomboka fandaharana iray ato amin'ny onjampeo izay hitatitra tsy mitsahatra tahaka ny filazàna toetr'andro ny olan'ireo mpialokaloka ”
Ny teny hoe mpialokaloka—“nanmin” amin'ny Japone)— dia tsy miseho matetika amin'ny lohateny vaventin'ireo vaovao Japone. Latsaky ny 50 isan-taona eo ihany no mpialokaloka eken'i Japana (39 no nekeny tamin'ny 2010), na dia faharoa amin'ny habetsahan'ny famatsiambolan'ny UNHCR manerana izao tontolo izao aza no azony. Isa kely faran'izay mahazendana io ho anà firenena nosy kely iray tòny sy milamina. Ny sasany amin'ireny mpitady fialokalofana ireny no misedra fahasarotana ao Japana, tahaka ny fandroahana na famonjàna. Ho an'ny Japone, ny olan'ny mpialokaloka dia zavatra mitranga any amin'ny faritra hafa, mahantra eto ambinin'ny tany. “Tahaka ny hirifiry tsy nolalovany izany,” hoy i Katsuya, “tsy hoe fotsiny elanelana ara-batana fa tena ara-tsaina ihany koa. Mihevitra ny tsy ho isan'izay ho mpialokaloka velively ireto izy.”
Nanimba trano fonenana 126.583 [ja] ilay loza voajanahary ary, tao Fukushima fotsiny, olona 160.000 no tsy maintsy nafindra toerana nesorina tamin'ny trano nonenany. Olona 100.000 ankehitriny no miaina anaty fonenana vonjimaika ao Fukushima, ary 60.000 hafa no miparitaka manerana an'i Japana.
Ho an'ny vahoaka Japone, ny horohorontany tamin'ny 2011 sy ny loza tao Fukushima dia nitondra ny olan'ireo mpialokaloka ho eo an-tokonam-baravaran-dry zareo, izy roa ireo izay samy manamarina sy manamafy ny asa nataon'i Katsuya efa ho 10 taona maninjitra izao.
Nanmin now! mandeha ao amin'ny FM79.7MHz, foibenà radiom-paritra iray ao Kyoto, sy azo kitihana ao anaty aterineto araka ny izay ilàna azy. Ny boky voalohany nosoratan'i Katsuya Soda [amin'ny fiteny Japone] Tolokevitra avy aminà Onjampeonà Vondrom-piarahamonina anaty Vanim-potoana iray mety hahatonga ny tsirairay ho mpialokaloka―Fampifandrohizana Ireo Feo Avy Ao Fukushima dia azo alaina [ja] ao amin'ny Amazon.co.jp.